Ra’iisul Wasaaraha Japan Shinzo Abe oo is casilayo - Jowhar Somali news Leader
Home News Ra’iisul Wasaaraha Japan Shinzo Abe oo is casilayo
Ra’iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa isu casilayo sababo la xiriira xaaladdiisa caafimaad sida ay sheegtay warbaahinta gudaha.
Ra’isul wasaaraha ayaa muddo sanada ah la xanuunsanaa gaaska caloosha balse waxaa la aaminsan yahay in xaaladdiisa ay ka sii dartay maalmihii dambe.
Ra’isul wasaaraha ayaa waxa uu xanuunkan oo ku dhacaca mindhicirka weyn ka cabanayay tan iyo yaraantiisii.
Haddii uu is casilo waxay horseedeysaa in xisbiga talada haya ay cod u qaadaan cidda la wareegeysa xilkiisa. Doorashadan ayaa waxaa xigi doona codka baarlamaanka oo dooran doona raysal wasaaraha xiga. Qofka guuleysta ayaa jagadaasi sii hayn doona ilaa bisha September ee 2021-ka.